အီမရိတ်စ်ကွင်းမှာ ရုန်းကန်ရဖို့ရှိနေတဲ့ လက်ရှိချန်ပီယံ မန်စီးတီး
12 Aug 2018 . 3:37 PM
ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်(၁) Super Sunday မှာတော့ အာဆင်နယ်နဲ့ လက်ရှိချန်ပီယံ မန်စီးတီးအသင်းတို့ အီမရိတ်စ်ကွင်းမှာ အားစမ်းကြမယ့် ပွဲကြီးပွဲကောင်းပါဝင်နေတယ်။ ဒီရာသီမှာ နည်းပြအပြောင်းအလဲ လုပ်ထားပြီး ကစားသမားသစ် တချို့ခေါ်ယူပြင်ဆင်ထားတဲ့ အာဆင်နယ်တို့ မန်စီးတီးအသင်းကို ဒုက္ခပေးနိုင်မလား စောင့်ကြည့်ရမယ်။ အစောပိုင်းပွဲတွေမှာတော့ လီဗာပူးလ်-၀က်စ်ဟမ်း၊ ဆောက်သမ်တန်-ဘန်လေ တို့ ယှဉ်ပြိုင်သွားကြမှာပါ . . .
လီဗာပူးလ်-၀က်စ်ဟမ်း (တနင်္ဂနွေ ည ၇း၀၀ နာရီ)
နွေရာသီမှာ ကစားသမားသစ်တွေကို ပေါင်သန်း(၁၀၀)ကျော် အသုံးပြုပြီး အားဖြည့်ထားတဲ့ လီဗာပူးလ်နဲ့ နာမည်ကြီး ကစားသမားတွေ ခေါ်ယူထားတဲ့ ၀က်စ်ဟမ်းတို့ရဲ့ ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံမှုက အရင်နှစ်တွေကထက် ပိုပြီး အကြိတ်အနယ်ရှိလာမယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတွေတုန်းက အလယ်အလတ်အသင်းတွေနဲ့ တွေ့ရင် ရုန်းကန်ရလေ့ရှိတာကို လီဗာပူးလ် ပြင်ဆင်နိုင်ပါ့မလား။ အန်ဖီးလ်ကွင်းမှာ လီဗာပူးလ် အနိုင်ရဖို့ရှိပေမယ့် ၀က်စ်ဟမ်းရဲ့ လက်ရှိအနေအထားက တောင့်တင်းလာတာကြောင့် ခက်ခက်ခဲခဲကစားပြီးမှ ကပ်နိုင်သွားဖို့ရှိတယ်။
ဆောက်သမ်တန်-ဘန်လေ (တနင်္ဂနွေ ည ၇း၀၀ နာရီ)
နှစ်သင်းစလုံးရဲ့ ကစားသမားစုဖွဲ့မှုနဲ့ ခြေစွမ်းက အကွာကြီးမဟုတ်ဘူး။ ဆောက်သမ်တန်အသင်းက အရင်နှစ်က ကစားသမားတွေကိုပဲ အားပြုထားပြီး ကြီးကြီးမားမား ပြောင်းလဲမှု မရှိပေမယ့် ဘန်လေကတော့ ဂိုးသမား ဂျိုးဟတ် Joe Hart အပါအသင် ကစားသမားသစ်တချို့ ခေါ်ယူအားဖြည့်ထားတယ်။ ဒါပေမဲ့ အိမ်ကွင်းဆိုရင် ခြေစွမ်းမာကျောတဲ့ ဆောက်သမ်တန်ကိုပဲ ရွေးချင်ပါတယ်။
အာဆင်နယ်-မန်စီးတီး (တနင်္ဂနွေ ည ၉း၃၀)
နည်းပြသစ် အူနိုင်းအမ်မရီ Unai Emery လက်ထက်မှာ အာဆင်နယ် ဘယ်လောက်အထိ ပြောင်းလဲသွားမလဲဆိုတာ စမ်းသပ်ခံရမယ်။ ဂိုးသမား လေနို Leno ၊ ခံစစ်မှာ ဆိုကရေတစ် Sokratis ၊ လစ်ခ်ျစတိုင်နာ Lichtsteiner ၊ ကွင်းလယ်မှာ ဥရုဂွေးလူငယ်ကစားသမား တော်ရဲရား Torreira တို့ကို ခေါ်ယူထားတဲ့ အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ လူစာရင်းက အားရစရာကောင်းတယ်။ လက်ရှိချန်ပီယံ မန်စီးတီးအသင်းက မာရက်ဇ် Mahrez တစ်ဦးတည်းကိုသာ ခေါ်ယူထားပေမယ့် ခြေစွမ်းက ထက်မြက်နေဆဲဆိုတာ ပြီးခဲ့တဲ့ ကွန်မြူနတီဒိုင်းပွဲမှာ တွေ့ရမယ်။ နေရာအလိုက်မှာလည်း နှစ်သင်းစာ လူစာရင်းရှိနေတဲ့အပြင် ဒီပွဲမှာ အဓိက ကစားသမားအစုံအလင် ပါဝင်လာမှာဖြစ်လို့ အာဆင်နယ် သတိထားကစားရမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ အီမရိတ်စ်မှာ အာဆင်နယ် မရှုံးနိုင်ဘူးလို့ ထင်တယ်။
Photo:Evening Standard,Getty Images,pktribune.com
အီမရိတျဈကှငျးမှာ ရုနျးကနျရဖို့ရှိနတေဲ့ လကျရှိခနျြပီယံ မနျစီးတီး
ပရီးမီးယားလိဂျပှဲစဉျ(၁) Super Sunday မှာတော့ အာဆငျနယျနဲ့ လကျရှိခနျြပီယံ မနျစီးတီးအသငျးတို့ အီမရိတျဈကှငျးမှာ အားစမျးကွမယျ့ ပှဲကွီးပှဲကောငျးပါဝငျနတေယျ။ ဒီရာသီမှာ နညျးပွအပွောငျးအလဲ လုပျထားပွီး ကစားသမားသဈ တခြို့ချေါယူပွငျဆငျထားတဲ့ အာဆငျနယျတို့ မနျစီးတီးအသငျးကို ဒုက်ခပေးနိုငျမလား စောငျ့ကွညျ့ရမယျ။ အစောပိုငျးပှဲတှမှောတော့ လီဗာပူးလျ-ဝကျဈဟမျး၊ ဆောကျသမျတနျ-ဘနျလေ တို့ ယှဉျပွိုငျသှားကွမှာပါ . . .
လီဗာပူးလျ-ဝကျဈဟမျး (တနင်ျဂနှေ ည ရး၀၀ နာရီ)
နှရောသီမှာ ကစားသမားသဈတှကေို ပေါငျသနျး(၁၀၀)ကြျော အသုံးပွုပွီး အားဖွညျ့ထားတဲ့ လီဗာပူးလျနဲ့ နာမညျကွီး ကစားသမားတှေ ချေါယူထားတဲ့ ဝကျဈဟမျးတို့ရဲ့ ထိပျတိုကျတှဆေုံ့မှုက အရငျနှဈတှကေထကျ ပိုပွီး အကွိတျအနယျရှိလာမယျ။ ပွီးခဲ့တဲ့ရာသီတှတေုနျးက အလယျအလတျအသငျးတှနေဲ့ တှရေ့ငျ ရုနျးကနျရလရှေိ့တာကို လီဗာပူးလျ ပွငျဆငျနိုငျပါ့မလား။ အနျဖီးလျကှငျးမှာ လီဗာပူးလျ အနိုငျရဖို့ရှိပမေယျ့ ဝကျဈဟမျးရဲ့ လကျရှိအနအေထားက တောငျ့တငျးလာတာကွောငျ့ ခကျခကျခဲခဲကစားပွီးမှ ကပျနိုငျသှားဖို့ရှိတယျ။
ဆောကျသမျတနျ-ဘနျလေ (တနင်ျဂနှေ ည ရး၀၀ နာရီ)
နှဈသငျးစလုံးရဲ့ ကစားသမားစုဖှဲ့မှုနဲ့ ခွစှေမျးက အကှာကွီးမဟုတျဘူး။ ဆောကျသမျတနျအသငျးက အရငျနှဈက ကစားသမားတှကေိုပဲ အားပွုထားပွီး ကွီးကွီးမားမား ပွောငျးလဲမှု မရှိပမေယျ့ ဘနျလကေတော့ ဂိုးသမား ဂြိုးဟတျ Joe Hart အပါအသငျ ကစားသမားသဈတခြို့ ချေါယူအားဖွညျ့ထားတယျ။ ဒါပမေဲ့ အိမျကှငျးဆိုရငျ ခွစှေမျးမာကြောတဲ့ ဆောကျသမျတနျကိုပဲ ရှေးခငျြပါတယျ။
အာဆငျနယျ-မနျစီးတီး (တနင်ျဂနှေ ည ၉း၃၀)
နညျးပွသဈ အူနိုငျးအမျမရီ Unai Emery လကျထကျမှာ အာဆငျနယျ ဘယျလောကျအထိ ပွောငျးလဲသှားမလဲဆိုတာ စမျးသပျခံရမယျ။ ဂိုးသမား လနေို Leno ၊ ခံစဈမှာ ဆိုကရတေဈ Sokratis ၊ လဈချြစတိုငျနာ Lichtsteiner ၊ ကှငျးလယျမှာ ဥရုဂှေးလူငယျကစားသမား တျောရဲရား Torreira တို့ကို ချေါယူထားတဲ့ အာဆငျနယျအသငျးရဲ့ လူစာရငျးက အားရစရာကောငျးတယျ။ လကျရှိခနျြပီယံ မနျစီးတီးအသငျးက မာရကျဇျ Mahrez တဈဦးတညျးကိုသာ ချေါယူထားပမေယျ့ ခွစှေမျးက ထကျမွကျနဆေဲဆိုတာ ပွီးခဲ့တဲ့ ကှနျမွူနတီဒိုငျးပှဲမှာ တှရေ့မယျ။ နရောအလိုကျမှာလညျး နှဈသငျးစာ လူစာရငျးရှိနတေဲ့အပွငျ ဒီပှဲမှာ အဓိက ကစားသမားအစုံအလငျ ပါဝငျလာမှာဖွဈလို့ အာဆငျနယျ သတိထားကစားရမှာပါ။ ဒါပမေဲ့ အီမရိတျဈမှာ အာဆငျနယျ မရှုံးနိုငျဘူးလို့ ထငျတယျ။